Sidee loo maamulaa xidhiidhka uu la leeyahay maamulkiisa?
Posted by Tranquillus | May 21, 2018 | Cilaaqaadka dadka dhexdooda
Maamulayaashu waxay leeyihiin door muhiim ah oo ay ku maareynayaan kooxaha, laakiin booskoodu mar walba ma fududa.
Isku-duwaha sareeya shaqaalaha iyo shaqaalaha, cadaadiska mararka qaarkood waa mid aad u xoog badan.
Tani maahan wax cillad ah oo ku saabsan jawiga shirkadda iyo tayada shaqada.
Sidaa awgeed maahan in xiriirka aad la leedahay maareeyahaagu uu noqdo sun, waa kuwan talooyin iyo talooyin.
Ogolow xaqiiqda ah inuu yahay kan ka sarreeya:
Tani waa wax aan si gaar ah u aragno shaqaalaha dhallinyarada ah, way ku adagtahay in la aqbalo in qofku ka sarreeyo madaxda sare ee shirkadda.
Inkasta oo tani ay tahay qaab-dhismeed, mabda "korodhsi" waxay noqon kartaa dhibaato.
Xaaladdan oo kale, waa inaad wax ku qortaa xaalada.
Si koox u shaqeyso si wax ku ool ah, waa in hoggaamiye hoggaamiyaa, sida kiisaska inta lagu jiro a shaqo kooxeed.
Ha isla markiiba ha u maleynin in maamulahaagu uu jiro si uu dhibaatooyin kuu keeno, laakiin, si liddi ah, si uu kaaga caawiyo inaad si waxtar leh u shaqeyso.
Ha u arkin maamulahaaga qof ahaan awood leh:
Mar labaad, waa aragti qeexan in shaqaale badani leeyihiin.
Maareeyahaaga oo aan ka badnayn, sidoo kale wuxuu cadaadis ka saaran yahay isaga oo sarreeya.
Ogow sida loo sameeyo go'aanka saxda ahmaareynta kooxaha ama qabashada waqtiyada kama dambaysta ah waa wax walba oo saameyn ku yeelan kara maamulaha, waxaana dhici karta inay cadaadiskaas ka saaran tahay kooxihiisa.
Xaaladdan, qofku waa inuu ogaadaa sida loo muujiyo sabirka iyo naxariis darrada.
READ Sidee udheer ujeeda shaqada?
Maamulahaagu waa aadanaha, sida adiga:
Dhinaca tababare oo horay u dalbaday, xittaa madax-bannaani, waxaad illoobi kartaa in uu yahay aadanaha sida kuwa kale.
Ma aha sababtoo ah wuxuu ka sarreeyaa inuusan haysan wax shaqsiyan ah ama mid xirfadeed.
Sidaa darteed waa inaad maskaxda ku haysaa in haddii ay jirto khilaaf, mar walba lagama xisaabtami karo adiga iyo weliba inaad adigu leedahay masuuliyadahaaga inaad tahay inaad qaadato.
Sidaas awgeed waa wax aan fiicnayn in la tuuro wax walba oo dhabarkiisa ah.
Si aad u ogaatid sida loola hadlo:
Maamulayaasha qaarkood waxay isticmaalaan oo ku xad-gudbaan xaaladdooda iyo kiiskan waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida loola hadlo.
Ha sugin xaalada si aad uhesho inaad ka hadasho.
Mawduuca kala hadal maamulahaaga, ka hadal waxyaabo aan ku habooneyn iyo haddii uusan rabin inuu wax maqlo, ha ka baqin inaad la hadasho HRD-gaaga.
Waxyaabaha muhiimka ah had iyo jeer waa inaad mudnaanta uheshaa wadahadalka iyadoon, subax wanaagsan, waxaad halis u ahaataa in aad isku dhejiso wax kasta oo ku saabsan xusuusin aan la jecleyn.
Sidee loo maamulaa xidhiidhka uu la leeyahay maamulkiisa? Agoosto 19th, 2018Tranquillus
horeMaxaad u baraneysaa luqad cusub?
socdaSidee loo tababaraa marka aanad waqti lahayn?
Sidee loo dhegeystaa si waxtar leh?
Dhaleecaynta dhismaha ayaa soo saari doonta, hela.
Koox shaqo oo wanaagsan